Chsụgharị Franchises maka Ọzụ | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Chsụgharị Franchises
Franchises Pluging nke Pụtara
Franchises ohuru ohuru
Anyị niile na-elekọta ụlọ anyị anya nke ọma. Nke a bụ ya mere ụlọ ọrụ pọmpụ na-eji abawanye ụba kemgbe ọtụtụ afọ yana ọ nwere nnukwu ndị ahịa maka ụdị ọrụ ndị a. Na mbu anyị ga-ekerịta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị n'akụkụ ndị ahịa nwere ike ịdabere na ha dị na ụlọ ọrụ ọkpọkọ iji nyere onye ọ bụla aka inwe mmetụta maka ahịa ahụ.
Ahịa maka ọrụ ọkpọkọ.
Nsogbu nwere ike ime mgbe niile ma ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji ahọrọ ịkpọ ndị ọkachamara na ndị ka ama ama na ngalaba ha. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-achọkarị ka ụlọ ha dị elu ma na-agba ọsọ ọzọ ma nwee nsogbu edozi. Ugbu a, anyị ga-ekerịta ụfọdụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ gburugburu ụlọ ọrụ ọkpọkọ mmiri anakọtara n'ime afọ ndị gara aga.
Statistics gburugburu ụlọ ọrụ na-akụ mmiri.
Thelọ ọrụ na-akụ ọkpọkọ ahụwo mmụba nke 0.8% n'ime afọ ise gara aga nke na-egosi mmụba na-arịwanye elu na-achọ na UK.
Ulo ahia ngwa ahia nke United Kingdom n’aru ego ruru £ 6 ijeri Britain
Enwere ihe karịrị 149,098 na UK ndị ọrụ n'ime mpaghara ọrụ pọmpụ.
Enwere ụlọ ọrụ pọmpụ 37,289 na-emeghe na UK ugbu a.
Thelọ ọrụ na-akụ ọkpọ na US na-eto ngwa ngwa karịa karịa na-agbagha okpukpu abụọ nke uto UK n'ime afọ ise gara aga site na-eto site na 5%
Ọnụ ahịa mmanụ a na-akụba na US bụ ihe dị ka ijeri dollar 113 US.
Ọzọkwa enwere ugbua ụlọ nde 27 na UK.
Kedu ihe nke a na-egosi maka ahịa ọkpọkọ?
N'ozuzu, ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi ahịa maka ọrụ pọmpụ na-abawanye mgbe niile ma enwere nnukwu ndị ahịa na ọ bụghị naanị na UK na US ụlọ ọrụ pọmpụ na-ebuwanye ibu n'ụwa niile. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a ebe enyerela gị maka ụlọ ọrụ. Ya mere, ụlọ ọrụ na-akụ pọmpụ na-egosi nnukwu ihe ịrịba ama nke ịba ụba kwa afọ ma nye ndị ọrụ na-arụ ọrụ ohere kachasị mma.
Kedu ihe ị ga - esonye na ụlọ ọrụ a na - akpali akpali site na ịjụ ajụjụ na franchiseek taa. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị na-eche mmampe ọkụ bụ bụghị n'ihi na echegbula. Maka na Franchiseek n’enye nnukwu aha ohere dị iche iche maka ịre mba ofesi.